OnePlus 7T Pro hadda waa rasmi, waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato qaabkan cusub | Androidsis
Dhamaadkii Sebtember, shirkadda Aasiya ee OnePlus ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay OnePlus 7T, isbeddelka OnePlus 7, oo ah terminal suuqa ku dhuftay 6 bilood ka hor iyo halkaas oo aan ku tirin karno wararka ku saabsan faraha gacmaha oo aan weli farta ku harno. Si aad u aragto cusboonaysiinta OnePlus 7 Pro, hWaa inaan sugno illaa iyo hadda.
Dhowr saacadood ka hor, shirkaddu waxay ku soo bandhigtay dhacdo, jiilka labaad ee OnePlus 7 Pro, terminal si gaar ah u soo jiita feejignaantiisa, naqshad sidii tii ka horeysay oo kale, wax waliba waa hore kamaraduna waxay ku taalaa dusha sare ee qalabka wayna muuqataa wayna baaba'aysaa markaan furayno arjiga kamarada.
Sannadkan, Chipmaker Qualcomm, ayaa markii ugu horreysay soo saaray nooc labaad oo processor-kiisa ah ee sannadkan, kaasoo ah 855, oo ah processor-ka waxaa laga heli karaa moodooyinka casriga ee ugu dambeeyay ee la soo bandhigay. OnePlus 7T cusub iyo 7T Pro waxay ka faa'iideysteen cusboonaysiintaan inay noqdaan mid dhiirrigelin dheeraad ah leh markay tahay cusboonaysiinta qalabka haddii aan ka nimaadno noocyadii la bilaabay 6 bilood ka hor, inkasta oo farqiga u dhexeeya uusan sinaba u xunayn.
Isbeddel kale oo aan ka helno OnePlus 7T Pro waa taas Kaliya waxaan haysannaa noocayaga oo leh 8 GB oo RAM ah, halkii laga heli lahaa 3 nooc oo leh awood kaladuwan oo RAM ah (6, 8 iyo 12 GB). Farqiga kale, waxaan sidoo kale ka helnaa keydka, kaydinta oo laga heli karo 256 GB UFS 3.0, oo nooca kaliya ah. OnePlus 7 Pro waxaa lagu heli karaa noocyada 128 iyo 256 GB oo keyd ah sidoo kale UFS 3.0.
Qeybta sawirka, waxaan ku aragnaa sida shirkadda Aasiya ayaa sharad ku dhigay isla muraayadaha indhaha mar labaad, muraayadaha muraayadaha indhaha oo noo ogolaanaya inaan ku duubno fiidiyowyada 960 fps oo ah soo jiidashada ugu weyn, marka lagu daro noo ogolaanshaha inaan duubno fiidiyowyo 4k. Qalabka kamaraddu wuxuu ka kooban yahay 48 mpx lens-ka ugu weyn ee ay soo saartay Sony, 8 mpx telephoto lens iyo 16 mpx lens-ballaadhan oo ballaadhan oo leh aragti xagal ah 117º.
Shaashadda jiilka cusub ee OnePlus 7 Pro Xaqiiqdii waa isku mid wixii aan ka heli karnay jiilkii hore, shaashad nooca AMOLED ah oo 6,7-inji ah, oo xallinkeedu yahay 3.120 × 1.440 iyo heerka cusbooneysiinta oo ah 90 Hz, mid ka mid ah xoogagga korantadan.
1 OnePlus 7T iyo OnePlus 7T Pro
2 Haddii aad rabto isbeddelo, daabacaadda 'McLaren' waa tan aad raadineyso
3 Cusboonaysiinta 6dii biloodba mar
4 OnePlus 7T Pro taariikhda la siidaayo
OnePlus 7T iyo OnePlus 7T Pro
Screen 6.67-inji AMOLED 6.67-inji AMOLED
Foomka 19.5: 9 19.5: 9
Xallinta 3.120 × 1.440 - Qiyaasta cabirka 90 Hz 3.120 × 1.440 - Qiyaasta cabirka 90 Hz
Gacaliye Sanpdragon 855 Snapdragon 855 +
Sawir Adreno 640 Adreno 640
Xusuusta RAM 6 / 8 / 12 GB 8 GB
Kaydinta 128 / 256 GB 256 GB
Kaameradda hore 16 mpx f / 2.0 oo leh xasilinta sawirka 16 mpx f / 2.0 oo leh xasilinta sawirka
Kaamirada gadaal weyn: 48 mpx f / 1.6 48 mpx f / 1.6
Kaamiradda dambe ee labaad 1: Lens Telephoto 8 mpx f / 2.4 Lens Telephoto 8 mpx f / 2.4
Kaamiradda dambe ee labaad 2: Xaglo ballaadhan Ultra 16 mpx f / 2.2 Xaglo ballaadhan Ultra 16 mpx f / 2.2
Amniga Farta Faraha Sawirka hoostiisa Farta Faraha Sawirka hoostiisa
Batariga 4.085 mAh oo leh lacag degdeg ah 4.085 mAh oo leh lacag degdeg ah
Lacag la'aan wireless Maya No.
Qiimaha Laga bilaabo 709 euro (6 GB RAM / 128 GB kaydinta) 759 euros
Haddii aad rabto isbeddelo, daabacaadda 'McLaren' waa tan aad raadineyso
OnePlus wuxuu soo bandhigay daabacaadda 'McLaren', oo ah nooc ka duwan nooca caadiga ah, kaliya maahan naqshadeynta, laakiin sidoo kale qeexitaannada uu gundhiggan na siinayo, maadaama uusan ka duwanayn nooca Pro, daabacaadda McLaren waxaa weheliya 12GB oo RAM ah iyo 256GB oo keyd ah.
Jirka qaabkani wuxuu ka sameysan yahay kaarboonka kaarboon wuxuuna na tusayaa ogeysiisyada aan sugeyno in laga aqriyo nal aad u fara badan oo lagu muujiyey geesaha shaashadda. Inta soo hartay qeexitaanka noocani waa isku mid. Si loo helo qaabkan, waa inaan bixinaa 859 euro, 100 euro oo ka badan nooca 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah.
Cusboonaysiinta 6dii biloodba mar
Mar labaad waxaa la xaqiijiyay in OnePlus raac waddo ka duwan soosaarayaasha kale iyo in aakhirka ay kugu kici karto qiimo aad u badan, maahan oo keliya sababta oo ah tusaalaha bilaabida terminal cusub 6-dii biloodba mar (wax ay Sony sameysay iyo sida ay ahayd) ayaa daali kara dadka isticmaala ee ku kalsoon kalsoonida soo saaraha (6 bilood kadib moobiilka hore ayaa loo cusbooneysiiyay) laakiin sababta oo ah kiisaska intooda badan, sida kiiskan iyada oo aan la sii dhaafin, faraqa u dhexeeya jiilkii hore iyo jiilka cusub ficil ahaan waa dayac.
Sannadkan, OnePlus wuxuu doortay inuu sii daayo laba nooc oo kala duwan oo ah OnePlus 7T Pro, mid leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah 759 euro iyo mid kale, oo ah daabacaadda McLaren oo leh 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah oo loogu talagalay 859 euro, sidaas awgeedna hoos loogu dhigayo xulashooyinka ay markii hore heli jireen dadka isticmaala. Haddii ay tahay moodel sii socon doonta mustaqbalka, wax walba waxay ku xirnaan doonaan iibka.
OnePlus waxay na siisaa qorshe cusboonaysiin dhiirrigeliso iibsashada noocyada cusub ee OnePlus, oo noo ogolaanaya inaan cusbooneysiino qalabkeenii hore illaa OnePlus 6T ama noocyada Xiaomi, Samsung, Sony, Apple, Huawei iyo Nokia. Barnaamijkan dib u cusbooneysiintu badiyaa qiimeyn maayo boosteejooyinka si wanaagsan, markaa haddii aan ku deg degno inaan ka takhalusno taleefannada casriga ah, waxaa had iyo jeer lagu talinayaa inaan iibino gacan labaad.
OnePlus 7T Pro taariikhda la siidaayo
OnePlus 7T Pro ayaa suuqa ku dhici doona 17 bisha Oktoobar, sida OnePlus 7T. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si toos ah uga iibsanno websaydhka OnePlus iyo sidoo kale Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OnePlus 7T Pro horeyba waa rasmi, waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato qaabkan cusub